Ethiopia: Bilaogy nanjavona · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 26 Desambra 2018 4:28 GMT
Tototry ny fanombatombanana sy ny fiampangana ny tontolon'ny bilaogy ao Ethiopia rehefa nanjavona tao anatin'ny efijerin'ny solosaina ireo tranonkala rehetra tao amin'ny firenena ka niantrano tao amin'ny sehatra Blogger malaza.
Bilaogy telo amby roapolo tamin'ireo bilaogy Ethiopiana miisa 32 arahin'ny Global Voices no tsy afaka nidiran'ny mpiserasera Ethiopiana – izay miankina avokoa amin'ny ampihimamban'ny fanjakana Ethiopian Telecommunications Corp amin'ny fifandraisany.
Tsy nanana olana tamin'ny fitsidihana ny rohy ireo mpisera aterineto ivelan'i Ethiopia (sy ny ao anaty foiben'ny Firenena Mikambana ao an-drenivohitra izay manana ny fifandraisany amin'ny aterineto manokana).
Nanome vaovao niaraka tamin'ny lohateny ara-kolontsaina ranoray toy ny vao noeritreretiko … .ny bilaogy ara-politika be mpamaky toy ny Weichegud! ET Politics , sy ethiopundit.
Tamin'ny fotoana nanoratana, dia tsy nisy ny filazana ofisialy avy amin'ny Orinasan'ny Fifandraisandavitra Ethiopiana mba hanazavana ireo fanjavonan'ireo bilaogy. Kanefa tsy nitaredretra tamin'ny fanamarihana ireo bilaogera .
Seminawork nanamarika ny vaovao tamin'ny filazàna fa nosakanana niaraka tamin'ireo tranonkala hafa ao amin'ny ‘blogspot’ amin'ny URL -n'izy ireo izany. Nitatitra ilay bilaogera monina any Ethiopia fantatra amin'ny anarana hoe Ethio-Zagol hoe:
Tao anatin'ny roa andro farany, voasakana tao Ethiopia ny bilaogy blogspots rehetra anisan'izany ny http://www.seminawork.blogspot.com/ . Ireo izay mitady fantsy ara-politika ao amin'ny weichegud na fanadihadiana mafonja avy amin'ny bilaogera dia tsy afaka niditra tamin'ireo tranonkala tamin'ny alàlan'ireo lohamilina fifandraisandavitra. Ankoatra izay, nosakanan'ny governemanta ny tranonkala Ethiopian Review, cyber ethiopia, quatero ary ny Free our leaders (Afaho ny mpitarika anay). Nilaza tamiko ny loharanom-baovao fa natao tamin'ny alalan'ny fifandraisandavitra izany niaraka tamin'ny toro-hevitra sy ny fanampiana avy amin'ny Shinoa.
Fanta-daza amin'ny fanehoan-kevitra manohitra ny governemanta ireo tranonkala rehetra voatonona ao amin'ny lahatsorany.
Nandefa ny hafatra tao amin'ny lahatsoratra Vaovao Mafana – Nosakanan'ny Governemanta ny Bilaogy! ny Ethiopian Politics, bilaogin'ny Blogger iray hafa tsy hita tao anatin'ny sisintany Ethiopiana:
Araka ny hevitr'i Ethio Zagol, voasakana ao Ethiopia avokoa ireo bilaogy “blogspot” rehetra, anisan'izany ny tranonkala “Ethiopian Review” sy “Free our leaders”. Nanambara i Ethio Zagol avy eo fa nataon'ny Orinasan'ny Fifandraisandavitra Ethiopiana miaraka amin'ny toro-hevitra sy fanampiana avy amin'ny governemanta Shinoa izany.
Ny Meskel Square, izay mampiasa ny sehatra MovableType ao amin'ny lohamiliny manokana hofainy dia nitsahatra noho ny fiampangana, saingy nanamafy ny fanjavonana misitery tamin'ny fahalasanan'ny billaogy:
Lasa aiza daholo ny bilaogera Blogspot ao Ethiopia? … Misy firaisana tsikombakomba lehibe ve? Sa andro hafa amin'ny fifandraisana ratsy avy amin'ny ETC? Ahoana moa no hahafantarantsika izany?